Ku dhawaad sideed qof oo ku geeriyootay qarax ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKu dhawaad sideed qof oo ku geeriyootay qarax ka dhacay Muqdisho
June 15, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Qarax gaari Muqdishoo. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ku dhawaad sideed qof ayaa ku geeriyootay qarax ka dhacay Muqdisho maanta oo Sabti ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo caafimaad.
Qaraxa oo ahaa gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa ka dhacay isgoyska Sayidka ee Muqdisho, sida ay sheegtay baabuurka gurmadka deg-dega ah ee AaMIN ambulance.
Sidoo kale 16 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa, AaMIN ambulance ayaa intaas ku dartay.
Gaari kale oo qarax wada ayaa haayadaha ammaanka ka hortageen isgoyska KM4, sida ay sheegeen ciidamada booliiska.
Afhayeenka howlgalada milatariga Al-Shabaab Cabdicasiis Abu Muscab ayaa sheegay in maleeshiyadu ay ka dambayso qaraxaas.
Asbuucyadii u dambeeyay, qaraxyada ay argagixisada Al-Shabaab ka geysato gudaha Muqdisho ayaa hoos u dhacay.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada nabadsugida Soomaaliya ayaa xalay oo Axad ahayd ku fashiliyay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho weerar la rabay in loo adeegsado gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay, sida uu sheegay sarkaal. Afhayeenka [...]
Ugu yaraan 12 qof oo ku dhimatay weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen guri huteel ah oo kuyaala waqooyi-bari Kenya
Mandheera-(Puntland Mirror) Koox hubaysan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday maanta oo Talaado ah guri huteel ah oo kuyaala magaalada Mandeera ee gobolka waqooyi-bari ee dalka Kenya, waxayna ku dileen ugu yaraan 12 [...]